“Ma ahan dastuuri in Madaxweynuhu ku soo magacaabo Ra’iisul wasaare muddo bil gudaheed ah” – Kalfadhi
“Ma ahan dastuuri in Madaxweynuhu ku soo magacaabo Ra’iisul wasaare muddo bil gudaheed ah”
August 26, 2020 August 26, 2020 Hassan Istiila
Siyaasiyiinta ku jira dowladda iyo kuwa mucaaradka ayaa wali dhaliilo u jeedinaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, iyagoona ku eedeynaya in muddo dheer ay ku qaatay soo magacaabista Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda.
Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ka hadlayay waddada u furan Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in aysan ahayn dastuuri in Madaxweynuhu ku soo magacaabo ra’iisul Wasaare muddo bil gudaheed ah.
“Madaxweynaha muddada uu kusoo magacaabi karo Ra’iisul Wasaaraha waa 30 maalmood. Haddii ay soddonkaas maalmood ka dhammaato, haddana wuxuu qaab maamul ah ula soo xidhiidhi karaa guddoomiyaha baarlamaanka, isagoo ka dalbanaya in waqti macquul ah oo dheeraad ah loogu daro si uu, wadatashiyo dheeraad ah usoo sameeyo ugu dambeynna ugu soo magacaabo Ra’iisul Wasaaraha. Marka u maleyn maayo in dhib dhinaca dastuurka ah ama mid siyaasadda ah uu ka imaanayo arrintaas.” ayuu yiri xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil.
Cabdi Faarax Juxa, wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa yiri “Madaxweyne Farmaajo weli ma magacaabin Raysal Wasaare, waqtigii laysla yiqiinna waa dhamaaday. Madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa xaggee Dastuurka kaga taal in 30 beri lagu magacaabo Raysal Wasaaraha?
Madaxweyne Farmajo ayaa laga rabaa inuu dadka ku qanciyo sharciga u banneeyey inuu magacaabidda Raysal Wasaaraha haysto in ka badan 30 cisho. Hadduu Madaxweynuhu mudadii sunnaha Dawladnimada dhaafay, qiil sharciyeedna uusan keenin waxaa dhalanaya su’aalo iyo shaki, ayuu hadalkiisu sii raaciyay kaddib qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook.
Madaxweyne Muuse Biixi oo la kulmay guddida komishanka doorashooyinka Somaliland
Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo loo doortay xoghayaha Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka